Jaban warshad qaybo naxaas ah CNC iyo shirkado cusub. Ouzhan
Naaxa CNC axdi qarameedka-saxnaanta axdi qarameedka qaybood
Mashiinka Mashiinka CNC waa in lagu dhejiyo mid ama gabal saxan dunmiiqa ka hooseeya dunmiiqa, dunmiiqa waxay ku qalabaysan tahay qalab goyn ah. Waxyaabaha farsamo ee goynta ayaa sidoo kale ka caan ah walxaha naxaasta ah. Tuubbada naxaasta aan xaddidnayn ee laga soosaaray naxaasku waa jilicsan tahay oo waxay leedahay iska caabin adag oo duug ah. Qaybaha saxda ah ee qashin-qubka ee mashiinka CNC ee adeegyada naxaasku waxay ku habboon yihiin qalabka warshadaha, guriga casriga ah, isgaarsiinta iyo kombiyuutarada.
Faa'iidooyinka qaybaha macdanta naxaasta ah ee Shanghai Ouzhan
- Muddo dheer
- Caabbinta adag ee adag
- Ductility wanaagsan
- Is rogrogmi kara oo miridh diidka ah
- Si fudud loo qaabeeyo
- Awood adag oo silig ah, ka-hortagga miridhku
OEM kartoo adeegga axdi qarameedka naxaas ah-Shiinaha Shanghai Ouzhan CNC qaybo axdi qarameedka naxaas
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, qaybo sax ah oo si fiican u sarreeya oo CNC ah oo leh tayo deggan oo la isku halleyn karo ayaa lagu shaqeyn karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka wax lagu shiido. Intaa waxaa sii dheer, alaabada naxaasta ah ee la shiiday ee CNC ayaa si adag u waafaqsan heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan u ah naxaas waxsoosaarka alaabada CNC macaamiisheena qaaliga ah.
Codsiga qaybaha wax lagu shiido naxaasta ah
Caafimaadka iyo dawooyinka, baabuurta, militariga, qalabka dhismaha, alaabta carruurtu ku ciyaarto, isgaarsiinta, iwm. Qaybaha qallalan ee naxaasta ah ee loo yaqaan 'CNC milled qaybaha' ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa qalabka guryaha, injineernimada iyo injineernimada tuubada.
Faa'iidooyinka adeegga warshadaynta naxaasta ee Ouzhan
- Dhammaan alaabooyinka naxaasta ah ee la shiiday ee CNC waxay ku xiran tahay baaritaanno tayo leh oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo soosaarayo qaybo sax ah oo naxaas ah.
Hore: Qaybo alxanka sheet bir kartoo
Xiga: Qaybaha birta ah ee birta ka sameysan ee lagu farsameeyo qaybaha makiinadaha